Ravin'ny Cetilistat (Oblean) (282526-98-1) hplc≥98% | AASraw
Cetilistat (Oblean) poeta
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / Vovoka Cetilistat (Oblean)
Rating: SKU: 282526-98-1. Sokajy: Vokatry ny vinaingitra
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mamorona sy ny famokarana maotera avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Cetilistat (Oblean) (282526-98-1), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Horonan-tsarimihetsika Cetilistat (Oblean)
Cetilistat (Oblean) karazan-tsoratra fototra tsotra
Name: Cetilistat (Oblean) poeta
Formula Molecular: C25H39NO3
Molekular lanja: 316.31
Cetilistat (Oblean) famokarana herinaratra
Famokarana simika: Vovoka Cetilistat
Brand Names: Oblean vovoka
Ny poety Cetilistat (Oblean) dia fanindriana ny lopase pancreatic, enzyme iray izay mamoaka triglycerides ao amin'ny tsinay. Raha tsy misy io biby io, dia tsy afaka ny hodiovina amin'ny asidra maimaim-poana ny triglycerides avy amin'ny sakafo, ary tsy avela hohanina. Ity zava-mahadomelina ity, raha oharina amin'ny vovobony orinasa Orlanda ankatoavin'ny FDA, dia mety hanana endrika azo tsapain-tanana kokoa noho ny molekiola samihafa. Ny fizarana fizarana 2 dia nanadihady lohahevitra mibaribary 612, marary foibe miaraka amin'ny BMI amin'ny 28 ka hatramin'ny 45 kg / m2 amin'ny fe-potoana fitsaboana 12. Ny cetilistat vovoka 80 sy 120 mg dia mampiakatra ny lanjany lehibe raha oharina amin'ny plasbo (3.85 kg sy 4.32 kg vs. 2.86 kg, respectively). Ny fihenan-tsakafo natelin'ny vatana Oblean dia mitovy amin'ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny poids orlistat (3.78 kg). Nandeferina ny vovoka Cetilistat ary nampiseho latsa-danja kokoa noho ny fisehoan-javatra mampidi-doza noho ny tao amin'ny plasbo sy ny orgie volo. Noho ny fisintonana ny vatan-dry zareo ao amin'ny vondrona Orlistat dia tena ratsy kokoa noho ny tao amin'ny 120 mg Oblean vovoka sy ny vondron'ny plasbo, ary noho ny zava-nitranga tsy dia lehibe loatra, ny vovobony Cetilistat dia mety hitarika ny famindrana lipase ho an'ny fahavoazana. Ny dingana 3 fitsapana ny vovobony Oblean dia mivoatra any Japon.
Inona no atao hoe dosage Oblean?
Ny dosage Oblean dia omena amin'ny kapila 60mg ho an'ny fitantanana am-bava. Ny fanafody dia entina miaraka amin'ny sakafo mba hiantohana fa afaka miasa izy raha mihinana ny sakafo, mba ho azo tsinontsinoavina ny fihinanana fatotra avy amin'ny sakafo. Ny dokotera dia hanoro anao ny habetsahan'ny fanafody entina amin'ny doka tsirairay, na ny dosage ilaina isan'andro. Zava-dehibe ny hanajana izany torolalana izany. Aza mihoatra noho ny dokotera milaza aminao mba handray.
Ny fomba fiasan'ny Cetilistat dia miasa
Ny vovoka Cetilistat dia vovoka lany maina ampiasaina miaraka amin'ny sakafo ambany kalorie. Izany dia miasa amin'ny fanakanana sombin-tsakafo be dia be avy amin'ny fanivanana sy ny fitsaboana ao amin'ny vatana. Io vovoka lozam-pangozana io dia sokajiana ho toy ny lipase inhibitor ary miasa mivantana eo amin'ny rafi-pandaminana ny digestive izay manakana ny hetsiky ny enzyme lipolytika antsoina hoe lipase. Ireo lipase ireo no ampiasain'ny vatana mba handevon-tsaka ny taviny. Na izany aza, rehefa fitsaboana miaraka amin'ny sakafo ny fanafody, dia mifatotra amin'ny lipase izany, ka manakana azy ireo tsy ho tapaka ny tavy. Ny menaka tsy tsy misy rano dia alaina ao anaty vovobony, ka miteraka fihenan-tsakafon'ny tavy ary mampihena ny fiterahana. Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fihinanana kalorie kalitao, dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny lanjan'ny fahavoazana izany ary mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny marary be marenina mba hamerenana amin'ny endrika, ka hanatsara ny fahombiazan'ny fahavoazana mahomby. Ny fomba fampiasana azy dia mitovy amin'ny poids orlistat taloha amin'ny fanesorana ny lopase pancreatic.
Tsy voatery haka mihoatra ny kapila 3 ao anatin'ny ora 24.
Mankao amin'ny sampana fitsangatsanganana akaiky anao avy hatrany ianao raha marary fo. Ny fisehoan-javatra mifandray amin'ny fihetseham-po toy izany dia ahitana ny fahasarotan'ny fofona na ny fitomboan'ny volo, ny vata famaranana, ny fitevehana, ny fery amin'ny hoditra, ary ny fanjonoana.
Tsy mety amin'ny mpitsabo rehetra ny Cetislim. Eritrereto mialoha ny mpitsabo anao alohan'ny hampiasana ity fanafody ity raha bevohoka ianao, mampinono, miezaka ny mieritreritra, mampiasa fanafody hafa (prescription na tsy prescription), mampiasa vokatra voangoloka na fanafody hafa, na raha misy alikaola na fahasalamana hafa olana.
Ny dosia marina sy ny ordinatera Oblean dia matetika miankina amin'ny marary sy ny fitsaboana. Aza manova ny dosage raha tsy mahazo ny fankatoavan'ny mpitsabo anao. Ity vokatra ity dia natao hampiasaina araka ny voasoratra sy omena.
Cetilistat (Oblean) varotra Marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ny poety Cetilistat (Oblean)
Ny marary fampiasa amin'ny fitsaboana amin'ny adin-tsakafo Cetislim dia mety ho voan'ny aretina. Tsy maintsy ampahafantarinao ny dokotera raha mitranga izany. Misy ohatra sasany omena eto:
Matavy anaty kodiarana
Flatus miaraka amin'ny tsiranoka
Ny tsy fisian'ny tsinay
Ny fihenan'ny nasalava
Ny fangirifiriana ao an-kibo
Ahoana ny hividianana vovobony Oblean: hividianana vovoka Cetilistat avy AASraw